Ayinguye wonke umntu onokubona iwebhusayithi yakho | Martech Zone
NgoLwesine, Aprili 25, 2019 NgoLwesine, Aprili 25, 2019 UVirginia Jacko
Kubaphathi bewebhusayithi kumashishini amaninzi, amakhulu namancinci, kweli xesha liphelileyo kwakubusika bokungoneliseki kwabo. Ukuqala ngoDisemba, uninzi lwee Iigalari zobugcisa kwisiXeko saseNew York zathiywa amatyala, neegalari zazingezodwa. Amakhulu amakhulu amatyala afakwe kutshanje ngokuchasene namashishini, amaziko enkcubeko, amaqela okukhuthaza kwanento eyaziwayo ye-pop uBeyonce, iwebhusayithi yabizwa ngegama lesenzo-seklasi ifakwe ngoJanuwari.
Ngaba sesichengeni abanaso ngokufanayo? Ezi webhusayithi bezingafikeleleki kubantu abangaboniyo okanye abangaboni kakuhle. Isimangalo esisiphumo safakwa ngabamangali ukunyanzela amashishini ukuba azise iiwebhusayithi zawo ukuthotyelwa kwabantu baseMelika abakhubazekileyo, ngaloo ndlela zibenza bafikeleleke kwiimfama nangaboni kakuhle.
Ukuba usebenzisa iwebhusayithi njengenxalenye yomsebenzi wombutho wakho, umbuzo ekufuneka ubuze wona ngulo:
Ngaba iwebhusayithi yam ifikeleleke ngokupheleleyo?
Ngaba uyabavala abathengi abanokubakho?
Abantu abaziimfama nabangaboni kakuhle njengam bahlala becinywa- nangona bengaqondanga - kwinxalenye enkulu yobomi ekusenokwenzeka ukuba uyithathe kancinci. Inkxalabo malunga nokuvalwa kwabafundi abangaboniyo ngaphandle kokufunda kwi-Intanethi indinyanzelile ukuba ndibhale inqaku malunga nemfuno yoyilo lwe-Meyi 8th 2011 ukushicilelwa ye Inkcazo yeMfundo ePhakamileyo, isiqwenga esenzelwe ukukhulisa ulwazi phakathi kootitshala kunye neekomiti zabo ze-IT.
Abantu baseMelika abakhubazekileyo
Eyimfama, isidingo sokufikelela kwiwebhusayithi- kunye Ukuthotyelwa kweADA enokuqinisekisa ukuba inwenwela kumacandelo onke, ukusuka kwimfundo ukuya kumashishini, iinkonzo, amaziko enkcubeko kunye neminye imibutho. Ukuba unokubona, cinga ngendlela oxhomekeke ngayo kwi-Intanethi emsebenzini wakho wemihla ngemihla nakubomi basekhaya. Zingaphi iiwebhusayithi ozindwendwelayo ngosuku oluqhelekileyo? Khawufane ucinge ukuba bekunganjani ukuba ubungenakho ukufikelela kwezo ndawo, kwaye phantse yonke imihla, uhlangabezana nezinto ezininzi ongenakukwazi ukuzenza.
Ngaphandle komthetho, ukufikelela ngokulinganayo nangokulinganayo kwiwebhu bekungekho lula. Ukuvalelwa ngaphandle, ukuthintelwa ukufikelela kwiiwebhusayithi ekuxhomekeke kuzo kurhwebo, ishishini, kunye nobomi ngokwabo kwihlabathi lethu namhlanje, kunokubangela ukuba abamangali abangaboniyo baye enkundleni. Xa abamangali befaka isuti, benza njalo becaphula ADA. Ungayikhumbula i-ADA njengomthetho onceda isitulo esinamavili ukuba sifikelele kwizakhiwo zikawonkewonke, kodwa ayisiyiyo yonke loo nto.
Umthetho waseMelika okhubazekileyo (ADA) uyaqonda ukuba abantu abane zonke ukukhubazeka ilungelo lokufikelela ngokulinganayo, kubandakanya abangaboniyo nabangaboni kakuhle, kwaye oku kuthetha ukufikelela kwimithombo yeendaba yedijithali kunye ne-intanethi ukongeza kwiindawo ezibonakalayo. Kusentliziyweni yomcimbi kwisikhukula sangoku seesuti ze-ADA.
Abantu abangaboniyo nabangaboni kakuhle basebenzisa umfundi ukusinceda ukuba sihambe kwaye sisebenzise iiwebhusayithi. Abafundi bacacisa into ekwisikrini kwaye bayifunde ngokuvakalayo ngombane, besenza ukuba sikwazi ukufikelela kwinto esingayiboniyo. Itekhnoloji enqanaba lokudlala.
Kodwa, sitshixiwe ngaphandle xa sijongana neewebhusayithi ezingafakwanga khowudi ukuba sihanjiswe sithi. Ukuba uzama uku-odola ukutya, bhukisha igumbi lasehotele okanye ungene kwiwebhusayithi kagqirha kwaye indawo ayimiselwanga ukufikelela, ugqibile. Khawufane ucinge xa ​​uzama ukwenza umsebenzi wakho ngaphandle kokufunda iscreen; yiloo nto ejongene nomsebenzi ongaboniyo nongaboni kakuhle yonke imihla.
Khusela indawo yakho ukuba ingabi yi-Achilles Heel
Kwishishini elikhulu, intshukumo eya kulungiso ithe tye. Banobutyebi kunye nokuthotyelwa, abasebenzi bezomthetho kunye ne-IT ukukhawulezisa iiwebhusayithi zabo ukuba zihambelane neemfuno ze-ADA. Banokuhlengahlengisa amanqaku kwaye baphinde babhale ikhowudi ngokukhawuleza ukulungiselela iimfuno zabatyeleli abangaboniyo, ukunika ukufikelela kunye nokusisiseko sokwamkela.
Kodwa, amashishini amancinci naphakathi kunye nemibutho ihlala icela umngeni kwizixhobo. Kudliwanondlebe lweendaba, abanini bamashishini abancinci nabaphakathi abebekhe babizwa kwiihempe zeADA bathi baziva besemngciphekweni.
Oku kunokuqwalaselwa ngokulula kwisibonelelo somntu wonke. Ukubonisana namaqela okukhuthaza abantu abangaboniyo nabangaboni kakuhle kunokuba sisiqalo esihle kule mibutho, kwaye kukho izikhokelo ezininzi zokugcina engqondweni njengoko ziqala inkqubo yokufezekisa ukuthotyelwa kwe-ADA kwiiwebhusayithi zazo.
Into onokuyenza Ukuqinisekisa ukuba iWebhusayithi yakho iyaFikeleleka
Yintoni ongayenza ukuba uneshishini kwaye ufuna ukunqanda ukunyanzelwa ukuba uthobele kwinqanaba lesimangalo saseburhulumenteni? Ukuhamba phambili kwengxaki kubiza imali encinci kwaye kukuhamba ngobulumko:
Sebenza negosa lakho lokuthobela okanye ingcali ukuqinisekisa ukuba iiwebhusayithi zakho ziyahambelana ngokupheleleyo Imigaqo yeADA kunye nomgangatho ofikelelekayo weWCAG 2.0 / 2.1 wewebhusayithi;
Funa iingcebiso kumaqela enkxaso yabangaboniyo okanye abangaboni kakuhle, njengathi. Banokunikela udliwanondlebe lwewebhusayithi, uphicotho, kunye nokufikelela kwizixhobo ezinokugcina ukuthobela;
Khuthaza iikhowudi zakho kunye nabenzi bemxholo ukuba baphucule iwebhusayithi yakho ngokwenza oku:
Amaqhosha elebheli, amakhonkco kunye nemifanekiso eneenkcazo zombhalo, ezaziwa njenge Iithegi ze-alt;
Lungisa uyilo ukuze umphambili kunye nemibala yangasemva yanele umahluko;
Qinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho ihamba ngokulula usebenzisa ifayile ye imbonakalo yekhibhodi.
ukusebenzisa uqeqesho lwasimahla kunye nezixhobo ezikwi-Intanethi ukuze uhlale ngaphezulu komthetho.
Iqabane neminye imibutho kunye namashishini, ngokuthembisa ukwenza iiwebhusayithi zakho ukuba zifikeleleke kubantu abangaboniyo ngomhla obekiweyo owamiselayo.
Ezi ntshukumo zinceda imibutho ngeendlela ezininzi: ngokubandakanya, umema abathengi abaninzi kunye nabaxhasi kwiwebhusayithi yakho-umnyango wangaphambili wombutho wakho. Ngokukhokela, uphucula umbono woluntu; Ixabiso lakho liyonyuka xa usenza amanye amathuba okufikelela. Kungenxa yoko le nto Indlu yesibane yaseMiami yeeMfama kunye neZingaboni kakuhle wayengomnye wabokuqala ukubonelela ngamashishini kunye neenkampani kwilizwe liphela thethwano kwiwebhusayithi ukuqinisekisa ukuthotyelwa kwe-ADA.
Ekugqibeleni, oku kumalunga nokwenza okulungileyo. Ngokwandisa ukufikelela, uyayithobela imithetho kwaye uqinisekisa ukuba abantu-nokuba banaziphi na izakhono-banikwa ithuba elifanayo njengaye wonke umntu. Ayisiyonto ilungileyo kuphela, yeyaseMelika, kwaye amashishini ethu, amaziko enkcubeko kunye neenkwenkwezi ezinkulu ezinje ngoBeyoncé kufuneka bayikhumbule loo nto. Ukubandakanya akubikho nje kulungile into- yiyo kunene into.
tags: adaAbantu baseMelika abakhubazekileyo benzaukungaboniityalaabangaboni kakuhle
UVirginia Jacko nguMongameli kunye ne-CEO ye-Miami Lighthouse yeeMfama kunye neZingaboniyo eziguqula ubomi babantu abangaphezu kwama-75,000 ngonyaka ngokubabonisa indlela ekubonakala ngayo ngaphandle kokubona.